Zimbabwe: 1. What is the current situation for supporters of the MDC in Zimbabwe? 2. Is there state protection available for supporters of the MDC in Zimbabwe? 3. Please provide information about a member of the MDC and a Member of Parliament in Zimbabwe named Mr. Malinga. Are there reports of the Zanu-PF burning down Mr Malinga's house? 4. Is there information on Blessing Chebundo standing for parliament in Zimbabwe? 5. Are there reports of teachers in Zimbabwe who did not support the Zanu-PF being forced to resign by the Zanu-PF during 2003? 6. Is there information about a rally held in Perth in early 2008 organised by Rumbidzai Tsvangirai, the daughter of the leader of the MDC?